“Na Nyaataa Jiraa Cal” Hin jennu
GMN: Gaaffii fi Deebii Ajjeefamuu Artiisti Hucaaluu Hundeessaa Ilaalchisee
Falmataa - July 2, 2020 0
GMN: Gaaffii fi Deebii Ajjeefamuu Artiisti Hucaaluu Hundeessaa Ilaalchisee - Waxabajji 30, 2020. https://youtu.be/OXqQ-3XBsek
Garbummaa fi Boo’icha itti Xumura Gochuu Qabana!
Garbummaa fi Boo’icha itti Xumura Gochuu Qabana! Damee Boruu:06/30/2020 Ajjechaan Haacaluu Xumuraa Fincila Garbummaa tahuu akka qabuu waan wal nama gaafachiisu miti. Hacaaluun jiraan isaa Wayyaanee...
Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa: Jawaar Mohaammad dabalatee namoonni 35 to’annoo jala ooluu poolisiin ibse (BBC Afaan Oromoo) -- Jawaar Mohaammad fi eegdota isaa dabalatee namoonni 35...
Daawud Ibsaa: 'Oromoon qabsoo keessatti ilmaan qaqqaalii dhabaa dhufe, kan Haacaaluu kun garuu bakka murteessituu kan geesse nutti fakkaata' (BBC Afaan Oromoo) - Waggoottan darban...
OMN: Wolaita Program; Knowledge about Wolaita
OMN: Wolaita Program; Knowledge about Wolaita Source: Wikipedia The Welayta, Wolayta or Wolaita is an ethnic group and its former kingdom, located in southern Ethiopia. According to the most...
Hachalu Hundessa- Murdered musician who sang for freedom
Hachalu Hundessa - Ethiopia's murdered musician who sang for freedom BBC.com | July 2, 2020 More than 80 people have been killed in two days of...
Ethiopia protests spark Internet shutdown and fears of high death toll after popular singer killed Ermias Tasfaye Daba, July 1, 2020 at 6:20 AM EDT People...
Statement on the Brutal Killing of the Oromo Hero - Artist Haacaaluu Hundeessaa Oromia Global Forum 6909 Laurel Ave, Suite 5219 Tacoma Park, MD20913 Email: Jemal.sadik@mnpera.org Phone: 612-483-0161 Tuesday, June...
Kumkummee Sirbaa, Guraandhala 20, 2020
Makmaaksa Oromoo ‘ Na nyaataa jiraa cal jedhi’ jedhu sababa malee mata duree hin godhanne. Oromoo! haala amma deemaa jirtu obsa na dhorkee, nyaatama jirraa cal jechuu hin jennu. Yaaddoo an qabu isin keessas jira jedheen abdadha. Har’a karaa hundaa tokkummaan Oromummaa, tokkummaan Qeerroo fi Qarree, sabboonummaa Oromummaa ija keenya duratti sharafaa, diigamaa jira. Of jajjabeessuf lakkii kun hin danda’amu jechuu dandeenya. Summii faca’aa jiru garuu tuffachuu hin qabnu. Mee gaggabaabseen waan natti mul’atu armaa gaditti kaasa. Irratti haasawaa, marihadhaa, balaa nutti aggaammatame qolachuuf of qopheessaa.
MM biyya Itophiyaa tokkummaa Oromoo diiguuf erga aangootti dhufee waan jedhe galmeen qabatee jira. Akeeka isaa kan ifa godhate yoon Wallagga deeme na ajjeesu, sana booda Wallaggaa fi Jimmatu wal lola jedhe. Oromoon Jimmaa fi Wallaggaa obboleewwan ilmaan Maccaa tahuu waan daganne itti fakkaatee ti. Yoom illee Wallaggaa fi Jimmi wal hin lolu. Kan wal lolu ergamtoota mootummaa ti malee.
Itti aansuun MM Baalee deemee haasawa godheen afaan Baaleen isinitti haasawa jedhe. Kanatti hin dhaabbannee marii jaarsolii Baalee wajjin godheen Oromoo amantii fi gosaan qooduu yaale. Kan inni jedhe Caffee Oromiyaa fi parlamaa federaalaa keessatti kan bakka isin bu’e warra Tuulamaa ti, isin haga ammaa nama bakka isin bu’u hin arganne, nuti nama bakka isin bakka bu’u godha jedhe. Jechi kun summii lama of keessaa qaba. Inni duraa Oromoo gosaan qooduudha. Inni lammaffaa amantaan qooduudha. Achi duwwatti osoo hin dhaabbanne MM , Baaleen Affaarii gad miti, bulchiinsa mataa keessanii qabaachuu waanti dhorku hin jiru jedhe. Kun shira Oromiyaa diiguuf karoorfame keessaa qabxii tokko.
Oromiyaa diiguuf shira xaxamaa jiruu keessaa inni duraa Wallagga Oromoo kaan irraa adda baasuu dha. Humni hidhate socho’aa jiru Wallagga keessa jiraachuun ifaa dha. Sana sababa godhachuun garuu dhalataa naannoo sanaa hojii irraa arihuun fi barataa barnoota irraa arihuun akeeka gara biraa dha. Wallaggi Oromoo kaan irraa adda bahee biyya mataaa isaa tolfachuu barbaada ololli jedhus qaama Oromoo adda qoodanii tokkummaa isaa diiguu ti. Kan Wallaggatti jalqabe bor Harargee, Baalee, Arsii fi Boorana waan hin geenyeef hin jiru.
Yaaddoo guddaa an qabu Oromo dhaabaa fi hoggana dhorkachuuf shira xaxamaa jiru dha. Jijjiiramatu godhamaa jiraa kottaa irraa hirmaadhaa waamicha jedhuun dhaaboti Oromoo hundi Finfinnee galanii jiru. Dhaaboti kun amma booda akka duraanitti qabsoo mormii mootummaa gaggeessuu hin danda’an. Qeerroo fi Qarreen ka’aa fincilaa karaa cufaa, .. kkf jechuu hin danda’an. Karaa nagaa qabsoo irraa hirmaanna waan jedhanii biyyatti deebi’aniif. Qabsoo Oromoo hogganna dhabaa jira kan jedhu yaaddoo guddaan qaba. Hogganoota amma Oromoo biratti mumul’atanii jiran yeroo gabaabaa booda sababa adda addaa itti funaanii hidhaatti naqu jedheen sodhaa dha. Maaliif sagantaa mootummaa Itophiyaa amma aangoo irra jiru keessa tokko Oromoo hogganaa fi dhaaba dhabamsiisuu waan taheefi.
Kan biraa filmaati dibbeen rukutamuuf hin jiru Oromoo abdii kee kutadhu. Filmaata irratti karaa walabaa fi haqaa wal dorgamanii sagalee ummatni kennatuun wal moo’uun akka Itophiyaa keessatti hin hojjanne dhaaboti mormitooti waajjira banuu irratti tarkaanfii fudhatamaa jiru irraa ifa tahee jira. Dhaabni waraqaa beekumsaa Boordii filannoo irraa fudhate akka waajjira hin bannanne yeroo dhorkamu filmaatni haqaa ni deemsifama jedhanii yaaduun of gowwomsuu dha. Oromoo! Filmaati jedhamu hin jiru. Osoo filmaatni hin geeggaffamin PPn moohateera. Karaa itti mirga kee falmatu ammuma irraa fala dhawachuu jalqabi.
Mee gaaffilee tokkoo tokko isin gaafadha.
Amma booda Oromiyaa kaartaa irraa haquun ni danda’amaa? Murni aangoo dhuunfataa jiru farra Oromoo ti. Oromiyaa kaartaa irraa haquu ni danda’aa? Ummatni Oromoo yoo kun tahe cal’isee itti ni dhiisaa?
Har’a Sabboonummaan Oromummaa dagaagee sadarkaa tokko irra gahee jira. Sabboonummaan Oromummaa kun sharafamee sadarkaa hin jiru jedhamutti gad bu’uu danda’aa?
Tokkummaan ummata Oromoo diigamee naannoon, amantaan, loqoda afaaniin wal qooduun deebi’ee bakka ni qabata jettuu? Kun bakka gahee tokkummaan Oromoo ni diigamaa?
Gaaffillee kana salphiftanii ilaalun hin tahu jechuu duwwaa osoo hin taane, mallattoo xixiqqaa mumul’atan osoo hin tuffanne ammuma irraa doomsuuf socho’uun fardii dha. Oromoon naannoo tokkoo yeroo tuqamu kaan dirmachuufiin mallatto bilchina sabboonumaa ti. Ana bira haga gahutti jedhanii cal’isuun balaa guddaaf adda adda nu qoodee nu afeera.
Oromoo! Haalli keessa jirru baayyee yaaddessaa dha. Inni Oromoof qabsoon godha jedhee waggoota 30 oliif lafa dhiitaa ture har’a sana ganee dantaa mataa jela yeroo deemu argina. Oromoo keessaa isa dantaan bitamu of keessa baafnee jabaannee tokkummaa keenya tikfannee sochii bilisumma keenya finiinsuu malee furmaatni hin jiru. Nafxanyaan wareegama Qarree fi Qeeroo Oromoo tin aangotti ol baatee jirti. Kana hin shakkinaa. Mootummaan amma jiru kan Nafxanyaa ti. Sunuu nafxanyaa akkaataa Oromoon itti yaadu beeku. Nafxanyaa tahuun dhiigaan Habashaa tahuu hin gaafatu. Dhalata ykn dhiiga Oromoo qabaatee kan mirga hiree murteeffannaa Oromoo dura dhaabbatu hundi Nafxanyaa dha. Waanti ifatti mul’atu:
Filmaati jedhamu hin jiru.
Hogganooti Oromoo baayyee hidhamuu ykn ajjeeffamuuf jiru.
Oromoo baayyee horin bituu, lafa sii keenninaan sossobachuun,
Isa gowwomfamuu dide dhabamsiisuun bal’inaan itti fufa.
Oromoo dafii mala dhawadhu. Qabsoo kee tokkummaan finiinsuu malee furmaatni hin jiru.
Abbaan Haqa qabu ni injifata.
Previous articleጋዜጣዊ መግለጫ ከኦሮሞ ነፃነት ግንባር: የጅምላ እስራት (Mass-Arrest)፣
Next articleWe need to come together — but not inside Prosperity Party’s straitjacket
Afaan Oromoo Admin - June 30, 2020 0
Abbaa-Muudaa Madda-Walaabuu February 20, 2020 At 10:57 am
Maqaa Waaqa: Gurraacha,
Garaa, Garbaa, Leemmuu, Roobaa, Taliilaa, Tokkicha, Akka, Dhibbaa; Aanfatdhe.
Horo (Wal) Kabajaa;
Rakkoon Keenya Hubatnoo Seenaa Dogoggoraa Keenna Irraa
Seenaan loogiin barreeffame milkii yeroo gabaabaa yoo ta’e malee
milkii waaraa (hulluuqaa) akka hin argamsiifne isinitti himuun akka isin salphisuu ta’etti fudha.
Falmiin dhaala maqaa jecha Itiyoophiyaa jedhu kanaa ka’ee sabootaa fii sab-lammootni akkasumas ummattootni biyya tana keessa jiraatanii fii biyyoota ollaa Itiyoophiyaa jechuunis ummattoota fedha isaanii ala gara biyyoota Jibuutii, Soomaaliyaa, Eertiraa, Keeniyaa fii Suudaanota lameenii keessa jiraatan hundi walii galteen dhimmicha mana murtii addunyaa bira geessanii ragaa seenaa ni qabna jedhan hunda dhiheessanii falmii dhugaa osoo taasisanii falmiin keenya garee ijoo dubbii 3(sadi)tti akka gargar bahu beekkamuu qaba.[page 2]
Abbaa-Muudaa Madda-Walaabuu February 20, 2020 At 11:59 am
1.Garee Seenaa Jaalattoota Caasaa Federaalizimii,
2.Garee Seenaa Qeentee Caasaa Tokkeessaa, fii
3.Garee Seenaa Islaamaa
caasaa federaa aanfatu akka tahan mirkanii dha.
Gareen sadan kuni biyyoota alaa baroota kumootaan lakkaawaman dura firoomfatan waan qabaniif dubbicha kallattii fii harka lafa jalaan keessa seenanii falmiin cimaan akka ta’u tilmaamuuf ogummaa raagduu horatchuun hin barbaadchisu.
Sababaan isaatis Israa’eel saboota Waaqeffannaa hordofan akka akaakayyoota isheetti wanta ilaaltuuf, akka duuba jirtu beekuu qabna. Biyyootni Islaam
illee Muslimootaaf lafee dugda duuba akka ta’an namni hin beekne hin jiru. Handhuurri warra Qeentee Aftokkee biyya Giriik waan ta’eef isheen illee dhoksaan Ortodoksii akka tumsitu ni tilmaamama.
Kanas ta’ee sana, gareen sadanuu seenaa biyyattii qircachuuf yaalii taasisanis dhugaan ni qal’atti malee hin cittu akkuma jedhamu namuu, wal kabajus, wal
tuffatee wal xireeffatus ykn wal balfee wal lagatus dhugaan kanuma abbaa dhugaa taati…(page3)
Abbaa-Muudaa Madda-Walaabuu February 20, 2020 At 5:06 pm
Egaa dhugaa qabatnee maqaa Itiyoophiyaa kana yoo dhaalchine gaheen ummattoota biyyaa hundaaf yoo ni murteessina ta’e 1ffaan. Oromoon, 2ffaan Soomaalee,3ffaan Tigree, 4ffaan Amaara, 5ffaan Agaw, 6ffaan
Sidaama…kkf jedhamee akka gurmuu ummataatti kan dhaalan yoo ta’u, akka dhuunfaatti tokko tokkooo keenya % wal qixatu nu gaha.
Abbaan jecha Itiyoophiyaa jedhu kanaa ammoo biyya alaa dhaqee halluun Giriik itti dibamee gara biyyaa galfamus abbaan jechaa qabeenya isaa waan hin wallaalleef Afaan Oromoo galateeffachuun dirqama seenaa taha.
Dabalctaanis Odaan mallattoo nagaa fii badhaadhinaa akka ta’e Kitaabota Qulqulluu hundaa fii amantii Waaqeffannaa tiin mirkanii ta’ee osoo jiruu faajjiin badhaadhinaa Araba irraa ergifatamee halluun garee qeentee itti dibamee haala nama burjaajessuun dhihaachuun isa madda rakkina keenyaa tahuun mirkana.
Abbaa Muudaa Dhugaa Soraa Lubbuu Waaqaa Lafaa Waaq Aanfatnaa Handhuuraa Itiyoophiyaa:
Leave a Reply to Abbaa-Muudaa Madda-Walaabuu Cancel reply
Russia’s President Vladimir Putin told the Oromo people why they should believe in themselves! By Aba Orma, Ph.D., March 31, 2020 Oromian soil can feed the...
Breaking News - Oduu Ammee ( police irrraa) Woliif Qoodaa Diraamaa kana Fashaleessaa Namoota 5, dhiira 4 fi dubartii takka kaadiroota #Bilxiginnaa bifa basaasatiin hojjachaa turanii...